Humbimbindoga hwaVaMugabe Hokonzera Mutauro muHurumende
Chikunguru 22, 2010
Hurumende iri kutarisirwa kuita zinyekenyeke zvakare mushure mekunge mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vaitazve zano ndega pakudoma nekudzora vamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika vasina kusuma mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, sezvodiwa nechibvumirano che Global Political Agreement.
VaMugabe vari kuisa vamiriri venyika vatsva kuUnited Nations muGeneva kuSwiterland, United Nations kuNew York, Angola ne Iran. Mumwedzi waChivabvu, VaMugabe vakambokonzera zvakare gakava apo vakadoma vatongi vematare vasina kusuma VaTsvangirai maVaMutambara.
Mutevedzeri wegurukota rezvekunze kwenyika, VaMoses Mzila Ndlovu, vekubato raVaMutambara, vatiwo hapana zvavari kuziva nezviri kuitika mubazi ravo.
Asi mumiriri weZimbabwe kuGeneva, VaChitsaka Chipaziwa, vaudza Studio 7 kuti vatori murwendo kuenda kuNew York kunotsiva VaBoniface Chidyausiku, mumiriri weZimbabwe kuUnited Nations. Vakuru muZanu-PF vaudza Studio 7 kuti VaMugabe, pamutemo, havafanire kusuma VaTsvangirai.
Asi mashoko aya arambwa negurukota muhofisi yaVaTsvangirai, VaJameson Timba, avo vati VaMugabe havana simba rekuita izvi pasi pechibvumirano chakavaka hurumende iripo.
Hurukuro naVaSanderson Makombe